« Mutant sy variant » koa ve ny olombelona ? - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny fiovan’ity virus ity ka toa mampatanjaka sy mampahery azy manoloana ny ain’ny olombelona no atao hoe « mutant ». Rehefa miova toa mihamatanjaka izy dia manjary « variant vaovao». Misy karazany vaovao. Misy ny variant brezilianina, variant anglisy ary misy ny variant afrikanina tatsimo. Mora maka toetra mifanaraka amin’izay toerana hidirany izy. Izay no maha loza azy. Raha matanjaka ny hery fiarovana ao amintsika dia miezaka hifanahantsahana amin’izany izy ka sarotra fehezina. Rehefa jerena akaiky izany ity aretina ity dia mifanaraka amin’ny fivoaran’ny fikarohana ara-pahasalamana sy ara-tekinolojika ankehitriny : izany hoe, ny fivoaran’ny fahalalana biolojika, indrindra ny lafiny génétique, ny fahalalana tekinika ampiharina amin’ny fikaroahana biolojika : toy ny vaksiny, ny famokarana ara-tsakafo…
Mahakasika ny olombelona ny resaka coronavirus
Mampipongatra ireo votoatim-panontaniana mipetraka amin’ny fiainan’olombelona izy ity : ny fahavelomana sy ny fanatsarana azy, ny fahafatesana sy ny fifehezana azy, ny fikarohana fomba na siansa na tekinika samihafa hanatanterahana azy. Etoana dia tsy ilay aretina intsony no ipetrahan’ny fikarohana fa ny olombelona voakasik’izany : hanao ahoana ny fiainany sy ny hiarovana azy, atao ahoana ny hanatsarana ny fiharin-karenany sy ny fivoarany, inona no tekinolojia vaovao haterak’izany fikarohana izany ?
Rehefa jerena araka izany dia ny olombelona mihitsy no sehatra iompanan’izao toe-draharaha izao. Hitondra fiovana goavana amin’ny olombelona ity valanaretina ity : manoloana ny fahafatesana, ny fitantanana ny fiainana, ny fanafody samihafa handresena ny aretina, ny fifandraisany amin’ny tontolo manodidina azy, eny hatramin’ny finoana an’Andriamanitra…
Raha tsorina dia « mutant » ny olombelona ary hisy « variant » vaovao koa. Raha toa ka izay matanjaka afaka manohitra ny aretina no ho velona, tsy voatery fa mety ireo tsy nandalovan’aretina ihany koa, satria tsy nifanerasera tamin’ny olona na zavatra mitondra ny aretina, dia karazan’olona vaovao izany na « variant », vaovao ny olombelona teraka aorian’izao 2020-2021 izao. Tsy ilay karazana no zava-dehibe fa ilay « mutation », fiovana manamafy fa « mutant » ny olombelona.
Mutation na fiofona vaovao
Any ivelany dia mihazakazaka ny siansa sy tekinolojia mamaritra fikarohana hitondra zava-baovao hifehezana ny valanaretina. Fa efa misongadina ny fifaninanana hazakazaka amin’ny voka-pikarohana samihafa. Manjary vaksinim-pirenena io voka-pikarohana io : toy ny hoe, amerikanina Johnson & Johnson, na sinoa Sinopharm, na sovietika Spoutnik, na frantsay… Mifaninana hametraka ny firenena amin’ny toerana ambony ny samy matanjaka. Ary fantatra fa mahakasika ny sehatry ny fikarohana biotekinolojika izany, ny fiantraikany ara-toe-karena ihany koa sy ny lalam-barotra ary ny politika eran-tany. Ny OMS moa dia mpanamarina sy mpankato ireny zava-bita ireny. Manjary famondronana ny firenena ny « COVAX », hiditra amin’ny fomba fitsaboana moderina na post-moderne. Resaka politika sy géopolitique goavana izany.
« Mutant » koa ny isam-pirenena. Madagasikara dia miady mafy amin’ny valan-java-boahary ananany sy nenti-paharazana. Mutant koa isika satria te hilahatra amin’ny voka-pikarohana moderina ireo raokandro malagasy na fitsaboana nentim-paharazana. Fotoan-dehibe hitsarana ny fahombiazan’ny vokatra samihafa izao. ny Sinoa koa dia mampiasa ny toy izany saingy efa nohatsaraina ara-tekinolojia ny azy.
« ny varian(t) na mutan(t) malagasy
Ity karazam-piovana mety manjo antsika ity no mety ho fahavoazantsika tanteraka. « Varian(t)-driana » na « mutan(t)-damba, mutan(t)-takolaka, mety ho mutan(t)-ondrika sy mutan(t)-jiro, mutan(t)di… samihafa… Natao hiova ny olombelona fa ny mivarilavo no ratsy indrindra. Rehefa manaiky ho resy isika dia izay no fahavoazana lehibe. Miraviravy tanana ary dia ny varavaram-pasana no hany vahaolana farany azo aroso. Ho an’ny kristianina, tsy fara-teny ny varavaram-pasana fa fiainana mitohy sy maharitra. Notantarain’i Kristy ny fanantenana izay navoakan’ny fasana, fa atorony kosa fa azontsika aseho eto an-tany fa zavaboary vaovao ao amin’i Kristy isika.
Ny « mutation » tsara ary ny « mutant » sahaza dia ilay fanatrarantsika ny fanahy maha olona. Ny fanahy no olona, ary rehefa « mutan(t)’ny rano isika, nefa tsy manaiky ho lanin’ny mamba dia mandresy ». Mutan(t)-drema » dia afaka mitraka. Dingana vaovao isan’andro tsy maintsy asandratra ny fanahy soa indrindra ao amintsika. Anisan’ny asongadin’ny fahendrena tatsinanana ary mampahomby ny Sinoa ireny « herim-panahy samihafa » ireny : ny rivotra, ny rano, ny volana sy masoandro, ny zavaboary manodidina, ny fifandraisan’ny mpiara-belona, ny fianakaviana, ny fiarahamonina, ny vavaka sy ny fifantohana ao amin’Andriamanitra…Io no lazain’ny manam-pahaizana tandrefana hoe « épigénétique ». Manan-karena tontolo afaka manandratra azy ho ambony ny olombelona ary tsy « génétique » fotsiny.
Rehefa tsapan’ny olona ireny dia ho tsaroany, fa ankoatran’ny olana « génétique » dia misy zavatra maro fanomezana ho an’ny olona, satria tsy nofo aman-dra fotsiny izy, fa fanahy soa indrindra. Rehefa tsapany izany dia « variant » vaovao izy satria « mutant » mihoatra noho ny valanaretina. Amin’izay dia tsy « coronavirus » mahafaty no atrehany fa ilay « couronne » na fehiloha isaloran’ny mpanjaka sy ny mpandresy.
Koa aza « mutan(t)-nondri-dava, fa atrehonao ny ady. Rehefa afaka miatrika ady ny olombelona dia mahita sahady ny hery miafina mihoa-pampana ao aminy, hery tsy hay tohaina na sakanana. Mizotra mankany ve isika amin’ny fomba fiady iombonana sa olona « mutan(t)-takola sy mutan(t)-nondrika sy mutan(t)mpim-bava ? Olona manam-panahy ny Malagasy fa novan’ny fomba samihafa tsy voafehiny. Ny fanahy no olona, saingy raha avelantsika ho very fanahy ny olona dia resy izy ary ho viravirain’ilay ratsy. Ny fiovana ara-panahy dia hery lehibe handresena ny herin’ny ratsy te hanimba ny maha olona.